Mashoko matatu anotsanangura iyi Batwing Sleeves Floral Silk Blouse; iri nyore, yakagadzirwa uye yakasununguka. Runako rwebusiki iyi iri mumugariro wayo wakajeka unochengetwa mubharest zvishoma.
Iyi blouse ishizha rimwe chete rinokwana zvose, pamwe nekukura kwepamusoro. Iine mitsipa yakapoteredza nemasleeve ekunwa akaita zvakanaka. Mhedziso yepamusoro is zvinoshamisa. Pamberi pacho, inomira pedyo nechepamusoro-soro, asi inowedzera zvakadzika kumashure.
Iko maruva anokopa pamusoro is mukati mawo iro basa rakanakisisa. Ive maruva maitiro ebhuruu uye ruvara rwemavara ane ruvara rwakasvibiswa neyemuchena-ruvara rwemusoro. Izvi zvinopa blouse chikumbiro chikuru.
Irobhu yakagadzirwa nesiriki inoita kuti igare yakasimba. Inogona kupfekedzwa chero ipi zvayo isingasviki outing apo pairi rakarongedzwa zvakanaka nezvimwe zvipfeko zvepfeko. Iyi blouse ingadai iwe unotarisa classy uye inofadza
Mucheka: Silk 100%
Style: Kazhinji, Vintage
Chimiro Chimwe: Kureba: 60-90cm, Bust: 200cm, Shoulder and sleeve: 44cm, Cuff: 26cm
Lantern Sleeves Bohemian Top
Lantern Sleeves Bohemian Top $56.95 $67.00
Yakasununguka Asymmetrical Plus Size T-shirt
Yakasununguka Asymmetrical Plus Size T-shirt $57.80 $68.00
Cotton Linen Tsvina Yakawedzerwa Yakasimba
Cotton Linen Tsvina Yakawedzerwa Yakasimba $56.95 $67.00
Petite ku Plus Size Cotton Linen Shirts
Petite ku Plus Size Cotton Linen Shirts $51.00 $60.00
Boho Chic Tribal Tassel T-Shirt $51.00 $60.00
Green Tie Dye Cotton uye Linen T-Shirt
Green Tie Dye Cotton uye Linen T-Shirt $57.80 $68.00
100% Cotton Purple Long Sleeve Shirt
100% Cotton Purple Long Sleeve Shirt $52.70 $62.00
V-Neck Basic T-Shirt $45.90 $54.00
Zen Lotus Linen Shirt
Zen Lotus Linen Shirt Zvapera